I-Kestrel nest studio inn - I-Airbnb
I-Kestrel nest studio inn
Le flethi okanye indlu ekwicomplex ekwicomplex yesithathu ejonge emaphandleni kodwa ikufutshane kakhulu nendawo ekuthiwa yiLakeside ePokhara, eNepal. Ilungele ukuzonwabisa ngezinto ezenziwa kwilali ekufutshane neendawo ezincinci zokuhamba ngeenyawo xa usiya phezulu.
Iflethi yethu inkulu kakhulu xa kuthelekiswa neendawo ezininzi eziqeshisayo ePokhara. Sisandul 'ukuyihombisa ngefenitshala nezinto zokucoca ezitofotofo. Uza kuba newardrobe epheleleyo yeempahla zakho kunye netafile yokugqokela kunye nekhompyutha/itafile yokutyela nangona ufuna ukuyisebenzisa. Ikhitshi lineepani nezitya ezaneleyo.
4.72 · Izimvo eziyi-43
Nayiphi na indawo apho abakhenkethi badibana khona ingakhala kakhulu ebusuku kodwa ikhaya lethu likumgama wemizuzu eyi-5 ukuya kweyi-10 ukusuka kwiindawo eziphambili zabakhenkethi. Ikwindawo enamakhaya asekuhlaleni ngoko uza kuba nethuba lokudibana nabamelwane bethu baseNepali abasemagqabini. Iflethi okanye indlu yethu ekwicomplex iphinde ijonge ifama ye-buffalo, kuxhomekeka kwixesha lonyaka, inezinto zokulima ezonwabisayo onokuzibukela kunye nezinye zenkcubeko.
I-Lakeside yindawo yeevenkile ezincinci, iivenkile zokutyela, iivenkile zekofu, iivenkile zezinto ezibhakiweyo, njl. Sineevenkile zethu zokutyela/iivenkile zekofu esizithandayo kuquka iCoffee Break, iChilly Bar, iGoodfather 's Pizza, iLakeview (entla), iLemon Tree neMaya.
Zininzi iiarhente ze-paragliding, ukunyuka intaba, ukukhwela isikhephe, njl. Sicebisa ukuba i-Nirvana Paragliding ibe yeyethu.
Ikhaya lezempilo le-Ayurveda, elingaphantsi kwemizuzu eyi-3 ukusuka kwiflethi yethu, yindawo yokufumana unyango olusempilweni (iimasaji) oluza kukwenza ufune ukubuya ukuze ufumane okungakumbi!
Ichibi iFEWA yimizuzu nje embalwa xa uhamba ngeenyawo ukusuka kwiivenkile eziseLakeside. Ungahamba ngesikhephe ngaphaya kwechibi, uhambe ngakwichibi okanye uhlale nje wonwabele ikomityi yekofu okanye isidlo esikhethekileyo kwenye yeendawo ezininzi ezisechibini.
Iqela labaphathi lihlala kumgangatho osezantsi wesakhiwo ukuze sikwazi ukufikeleleka lula.